February 18, 2019 - Book News Madagascar
YALI Chapter Madagascar – Tontosa ny hetsika ” Za mizara Fitiavana”
Tontosa soa aman-tsara ny hetsika “Za mizara Fitiavana” nokarakarain’ny Fikambanana Yali teny amin’ny EPP Analamahitsy ny Sabotsy 16 febroary 2019. « Za mizara fitiavana » Nofaranana ny Sabotsy 16 febroary 2019 lasa teo ny hetsika « Za mizara Fitiavana », nokarakarain’ny Fikambanana Yali (Young African Leaders Initiative). Hetsika izay nanambarana ireo ankizy telo (3) Read more…
Tapatapaka ny jiro ny herinandro lasa teo teto Antananarivo. Manoloana izany, nandray vahaolana vonjimaika ny ministeran’ny Angovo. Vahaolana vonjimaika ho an’ny delestazy Manoloana ny fahatapan’ny jiro niseho teto amintsika ny herinandro lasa teo dia nisy ny vahaolana vonjimaika noraisin’ny ministera mpiahy. “Nampitomboana ny solika nampiasain’ny Jirama”, araka ny nambaran’ny ministry Read more…